MyCoolClass | မည်သည့်နေရာမှမဆို သင်ယူပါ။
တစ် ဦး ချင်းစီစိတ်ကြိုက် ကလေးများအတွက်သင်ခန်းစာများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအုပ်စုသင်တန်းများ
သင့်ကလေး၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သီးသန့်သင်ခန်းစာများ (သို့) စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အုပ်စုသင်တန်းများဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောဆရာကိုရှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများသည်ကလေးများအားကျားကန်၊ ရုပ်သေးနှင့်ကစားနည်းအမျိုးမျိုးကို သုံး၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသင်ခန်းစာများပေးသည်ကိုနားလည်သည်။
သို့မဟုတ်အနုပညာဖန်တီးခြင်း၊ MyCoolClass သည်သင့်ကလေးအားအောင်မြင်သောအနာဂတ်အတွက်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်.
တော်တော်အေးတဲ့အပြင်ငါတို့ဆရာတွေအားလုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပညာပေးများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက ကလေးတွေကိုသင်ကြားရာမှာ
တစ် ဦး ချင်းအတန်းများ
ယုံကြည်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေရန်သီးသန့်သင်အံသောသင်ခန်းစာများယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများသည်ကစားနည်းမျိုးစုံ၊ အသုံးအဆောင်များနှင့်အခြားအရာများ သုံး၍ သင့်ကလေးအားစေ့စပ်ထားရန်အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်ကိရိယာများရှိသည်။
သင့်ကလေးကအနုပညာ၊ အက၊ ဂီတ၊ သိပ္ပံ၊ စာဖတ်တာကိုနှစ်သက်သလား။ ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်းကိုသင်ရနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့်သင်ယူခြင်း၊ အကြောင်းအရာများနှင့်ဘာသာရပ်မျိုးစုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအတန်းများကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
အခြားသင်ယူမှုပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများအားလုံး MyCoolClass အဖွဲ့အစည်းကိုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
MyCoolClass တွင်အရည်အချင်းအရှိဆုံးနှင့်အတွေ့အကြုံရှိနည်းပြဆရာများပါ ၀ င်သည်
Business English ကိုအထူးပြုသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ
နှင့်သင်၏သင်တန်းတိုးတက်စေရန်အာမခံသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောသင်တန်းများ ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု နှင့်တည်ဆောက် ယုံကြည်မှု။
သင်ဟာဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း၊ ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိသော Business English ဆရာများကသင့်အားအပြိုင်အဆိုင်များသောနိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအထောက်အထားသည်အားကောင်းသောအားသာချက်ဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတက္ကသိုလ်များနှင့်အလုပ်ရှင်များလိုအပ်သည်။ MyCoolClass တွင် IELTS, TOEFL, Cambridge စာမေးပွဲများနှင့်အခြားအရာများကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သောဆရာများရှိသည်။
သင်သည်ဘာစီလိုနာ၊ ပါရီသို့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်သို့ပြောင်းရွှေ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဒေသခံဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ MyCoolClass သည်နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုတွင်သင်တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်စေရန်ကူညီရန်ဘာသာစကား ၁၅ မျိုးကျော်ရှိသောဆရာများရှိသည်။
စာအုပ်လေးကို A အခမဲ့ Demo ယနေ့!
ရိုးရိုးစာသင်ခန်းသို့ ၀ င ်၍ သင်၏သင်ယူမှုစွန့်စားမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။
၁၀၀% အတည်ပြုထားသော Professional Educators များ
MyCoolClass သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအရည်အချင်းအရှိဆုံးပညာသင်ကြားသူများကိုသာလက်ခံသည်။ ဆရာများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှဆောင်ရွက်သောအဆင့် ၄ ဆင့်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်စေရမည်။ ဆရာများသည်စင်မြင့်ပေါ်မသင်ကြားမီရာဇ ၀ တ်မှုရာဇ ၀ င်စစ်ဆေးခြင်းကိုသဘောတူရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများအားလုံးသည်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများနှင့်ပြည့်မီကြောင်းအာမခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့စာရင်းတွင် ပါဝင်ပြီး နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ သင်ယူမှု အကြံပြုချက်များနှင့် ရံဖန်ရံခါ ပရိုမိုးရှင်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ သင်သည် အချိန်မရွေး စာရင်းသွင်းမှုကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ